PMMA Mpanamboatra akrilika sy mpamatsy - China PMMA Acrylic Factory
0,33 oz 10ml mazava tavoahangy plastika PMMA (Acrylic) vita amin'ny plastika vita amin'ny vozona 20-410
Ny tavoahangy famafazana fotsy 10ml anay dia vita amin'ny fitaovana PMMA. 100% vaovao sy avo lenta. Vita amin'ny plastika, azo ampiasaina indray, mahatohitra triatra ary azo simbaina. Azo ampiasaina amin'ny toner, rano esory ary rano misy alikaola. Azo ampiasaina hizara sy hitahiry ny ankamaroan'ny rano. tavoahangy famaohana paompy dia azo alaina amin'ny fiaramanidina, voaisy tombo-kase ary misy fivoahana. Ny habetsaky ny fatrany extrusion isaky ny fotoana dia 0,13 ml. Azo amboarina ny famafazana tavoahangy parfume ary tsy misy rano raraka. Serivisy OEM: Fanontana lamba amin'ny lamba landy Logo, labozia vita amin'ny plastika, fametahana fonosana. Mora ampiasaina ary hadio sy azo soloina indray. Ny haben'ny kely dia mety amin'ny fitsangatsanganana na amin'ny fitehirizana sy ny fandaminana manodidina ny trano. tavoahangy famaohana paosy
Tavoahangy feno volo plastika PMZ (Acrylic) 4 an-jiro mazava vita amin'ny vozona 40-400
Ny tavoahangy plastika 2 Galona voajanahary PMMA (Acrylic) dia fitoeran-javatra tena tsara ho an'ny fampiharana sy tsena isan-karazany. tavoahangy plastika boribory mangarahara ho an'ny tavoahangy vokatra fikarakarana ara-pahasalamana. varotra ary manatsara ny fisehoan'ny fampirantianao. Ny tendany vava mivelatra 40-400 dia manamora ny famenoana sy ny fanesorana ireo vokatra.